PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-18 - Isikhalo ngoBabes Wodumo ongondli
Isikhalo ngoBabes Wodumo ongondli
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-18 - IZINDABA - DELI MNCWABE
PHEZU kokuthi isilomo somculi othathwa njengendlovukazi yegqom’, uBabes Wodumo, siqashwa ngapha nangapha kodwa kuthiwa abazali baso bakhala ezimathonsi ngokuthi akabondli.
Abasondelene nomndeni walesi silomo somculi sengoma ethi
Ka Dazz, bapotshozele leli phephandaba ukuthi sebutshodile ubudlelwano phakathi bukaBabes Wodumo nabazali bakhe.
Kusolwa ukuthi ucwile ezinkambeni zikaFaro, yingakho engasayingeni eyokondla kubo.
“Akusemnandi kuleliya khaya ngenxa yemali. UBabes Wodumo kuyaziwa ukuthi uyawuhlanganisa uR500 000 ngenyanga awuthola ngokuqashwa kuphela. Kulo R500
000 ayibaliwe evela ngokudayiswa komculo nemikhankaso akuyona.
“Phezu kwalokho kubo kulele ikati eziko,” kusho umthombo osondelene noBabes Wodumo.
Umthombo uqhube wathi bakhona asebeke baqunga isibindi bamtshela uBabes Wodumo ukuthi akasilungise lesi simo kepha akezwa mshini. Uthe uyise kaBabes ungumbhishobhi oncike emalini yebandla engatheni kanti unina akasebenzi. Ngaphandle kwalokho sebekhulile ngeminyaka. Uqhube wathi esikhathini esidlule ubebathengela igilosa obungafunga ukuthi eyomcimbi, bengaludli olubabayo.
Kuthiwa sebedonsa kanzima abazali bakhe, akasayisi lutho kubo kanti bese bejwayele ukudla izibiliboco.
“Uma bemcela imali uvele athi uzobafakela kodwa angakwenzi. Kwesinye isikhathi athi ukhohlwe yikhadi lasebhange noma alandule athi akana twa. Inkinga wonke umuntu usuke azi ukuthi unayo imali kodwa akafuni nayo uthanda ukuyidla nabangani. Phela uBabes ukhokhelwa uR100 000 kuya kuR150 000 uma eqashiwe,” kusho umthombo.
Omunye umthombo uthe abakwaSimelane baze bacele kuMampintsha ovele abanikeze angabuzi nokuthi bazoyenzani.
“Yize begcina becele kuMampintsha kodwa ubudlelwano babo abubuhle selokhu kwavela izinsolo zokuthi ushaye uBabes Wodumo nezokuthi wadla imali yakhe (uBabes Wodumo),”
Umthombo uthe kuyimanje bakipite emzini kaMampintsha oseWestville, eThekwini, kanti uBabes akawutshelanga umndeni wakhe, umgcine ehlala eflethini eliseMhlanga.
“Sisola ukuthi ukuhlala kwabo ndawonye bakwenze ngemuva kokuthi umndeni kaMampintsha uphoxwe ngokaBabes kade ucela ukuthumela abakhongi ukuyocela isihlobo esihle kodwa umndeni kaBabes wenqaba,” kusho umthombo.
Lo mndeni ubukade uhlala eflethini eThekwini kodwa uBabes Wodumo wawuthengela umuzi eGlenwood nokuyilapho usuxakeke wodwa khona.
Ethintwa uyise kaBabes Wodumo uMbishobhi Mbongeni Simelane uthe: “Izindaba zomuzi wami angizikhulumi nabezindaba, ngicela ningabe nisangifonela,” esho evala ucingo.
Imizamo yokuthola ukuphawula kukaBabes Wodumo noMampintsha ayiphumelelanga njengoba izingcingo bezingabanjwa nemiyalezo abathunyelelwe yona abayiphendulanga.